EZONA ZI8 ZISADDLES ZEBHAYISIKILE EZIBALASELEYO KUHAMBO OLULUNGEKILEYO - IZIXHOBO
Ezona zi8 ziSaddles zeBhayisikile eziBalaseleyo kuHambo oluLungekileyo
Ukuhamba ngebhayisekile kunokuba yindlela elungileyo yokuhlala umile ngelixa unandipha inkululeko yaphandle enkulu. Kodwa kuye nawuphina umntu oqala ukungena kwihlabathi lokukhwela iibhayisikile, unokufumanisa ukuba uyaqaqanjelwa, ngakumbi emva kohambo olude.
Inxalenye enkulu yokuthuthuzela kwakho iyehla ukuba nesali efanelekileyo. Iya kukunika inkxaso oyifunayo kwaye ikuvumele ukuba ujikeleze ixesha elide ufuna. Umceli mngeni unokuvela ekufumaneni isali efanelekileyo njengoko zininzi iimilo, izimbo, kunye namaxabiso akhoyo.
Isali etofotofo ibalulekile kubagibeli kwaye iya kuthintela izilonda nokwenzakala. Ukufumana isali egqibeleleyo kuxhomekeke kwizinto ezininzi. Ubungakanani bokubamba, inkxaso yangaphakathi, kunye nomgangatho wesigqubuthelo unokuhluka ukusuka kwesinye isihlalo ukuya kwesinye.
Sifuna ukukunceda ngokufumana ezona zisali zingcono zeebhayisekile ezikhoyo namhlanje. Zonke ezi ziya kukunika ukukhwela ngokukhululekileyo. Konke okufuneka ukwenze kukukhetha okulungileyo kuwe. Masiqalise!
1. Ilaphu Scoop Radius Elite
Ngesiseko esibhetyebhetye ngokukodwa kunye noyilo olumxinwa lwangaphambili, esi sihlalo sebhayisikile se-Scoop sinika intsebenzo ebalaseleyo ngelixa ugcina ukhululekile,naxa unxibe ibhulukhwe emfutshane yebhayisekile.Isimbo sokugubungela esi sihlalo senziwe nge-microfiber engenamanzi kwaye i-cushioning ine-polyurethane foam.
Izinto ezibonakalayo zibonelela ngesixa esifanelekileyo sokubamba ukuze ungatyibiliki esihlalweni. Oku akupheleli nje ekwenzeni esi sihlalo sihlaziyeke kodwa kunciphisa ixesha lokuqhekeza, elinokuhlala ixesha elide nezinye izinto zesali.
Enkosi kuyilo lwayo, umphezulu wesali ulula kakhulu ukuwucoca, ngenxa yenkqubo yokubopha eyinxalenye-3 eshiya isihlalo ngemigca egudileyo kunye nokuqina okuzinzileyo.
Asl ndiyakuthanda tattoo
Iprofayile yesali ifanelekile kwizikhundla zokuma ngokuthe nkqo, njengoko kunjalo ngesihlalo esigoso. Zombini zilungele ukuhamba yonke imihla okanye ukukhwela ngamanye amaxesha, ezifuna ubhetyebhetye obuncinci. Ngohlobo olulungileyo lokuthuka, esi sihlalo sinokuba lukhetho olufanelekileyo lokulandela umkhondo okanye ukuhamba ngeebhayisikile entabeni.
2. I-Selle Italia SP-01 yokunyusa iSaddle
Ukuba ufuna isali yebhayisikile yendlela ekuvumela ukuba ukonwabele ukukhwela, olu lukhetho olufanelekileyo kuwe. Itekhnoloji yayo ephezulu inciphisa zonke iziphazamiso ezenza uxinzelelo olude kwindawo engqonge xa ​​ukhwele kunokubangela.
Imizila yokubamba yesihlalo yintsimbi engenasici kwaye iqiniswe nge-chrome eguqukayo kunye ne-manganese alloy. Oku kunika isali amandla kunye nokomelela. Kwaye kulula ukufaka kuyo nayiphi na ibhayisekile.
Iqokobhe lale sali yaseSelle Italia lenziwe ngokudityaniswa kwekhabhoni kunye nenqanaba eliphezulu lenylon polymer, enobunzima obumangalisayo ngelixa ibonelela ngenkxaso eyimfuneko ngaxeshanye. Kukwanjalo nakwimpahla yokugubungela ezobuchwephesha, eqinisekisa ukusebenza ngokuqinileyo kunye nobude bexesha lesali yonke.
Enye into emnandi ngale mveliso sisiqinisekiso somenzi ngokuchasene neziphene, esikushiya ugqunywe kwaye ungakhathazeki kangangeenyanga ezingama-24 ukusukela kumhla wokuthenga.
3. Isihlalo seVelmia esiBanzi
ukukhanya kwezibane zefoyer izimvo
Ngenxa yememori yangaphakathi yememori ngaphakathi, esi sihlalo seVelmia sigqibelele nokuba kungamadoda nabasetyhini. Ngelixa lingakuvumeli ukuba uqhelane nemilo ethile yesali, ngokuqinisekileyo iyanceda ukuba uhlala usokola ukufumana isali etofotofo.
Ezi zinto zikwabonelela ngokungenisa umoya ngokufanelekileyo ngelixa uhleli kuwo, ngenxa yoko awuzukuba naxhala malunga nokubila kwakhona okanye ukukhukhumala okubangelwa kuko. Ayisiyiyo loo nto kuphela, ukuthungwa okudityanisiweyo kwimpahla yangaphandle kwenza esi sihlalo singabi namanzi ngokupheleleyo.
Unokukhetha kwiimodeli ezintathu ezithile zesihlalo sebhayisekile seVelmia, ukuze ufumane enye elingana nendawo yakho yokukhwela yeyona ilungileyo. Kuxhomekeke kukhetho lwakho lomntu ngamnye kunye nendlela yokukhwela uya kuba nakho ukuhlengahlengisa isali nasiphi na isitayile osifunayo.
Isali iza nesibophelelo sesali esincedisayo kunye nencwadana yemiyalelo ekulula ukuyilandela, ke akuyi kuba naxhala malunga nokunyuka okunzima. Kwaye ukuba unengxaki, unokuthembela kwinkonzo yabathengi eluncedo kaVelmia.
4. Ilaphu Line S Elite Flat Isali
Kubagibeli abafuna isiseko esibanzi esongezelelweyo, esi sihlalo sendwangu sinokubonelela ngenkxaso efanelekileyo. Inesitayile sokunceda uxinzelelo ukwenza indawo yakho engaphezulu ukuba ibentofontofo, nokuba uyibeka phantsi koxinzelelo olunzima. Eli nqaku, elidityaniswe nempumlo emfutshane, likwa negalelo ekwandeni kokusebenza kwakho ngalo naluphi na ugqatso.
Indawo yokugibela ayikuvumeli kuphela ukuba ugxile ekukhweleni kwakho kodwa yagqitywa ngeendlela zokukhwela ezinobukrakra engqondweni. Ngaphandle kokubheka phambili, i-Cho-Mo iileyili ezisetyenziswa sesi sihlalo zihlala zomelele ngokumangalisayo kwaye zinokumelana noxinzelelo. Isihlalo sonke asikhaphukhaphu, ngoko ke asizukukucothisa.
Iitattoos ezincinci ze-aztec zabantu basetyhini
Isimbozo sangaphandle senziwe ngemathiriyeli engenawo manzi, eyenza ukuba kube lula ukuyicoca. Iyafumaneka ngokwahluka kwemibala eyahlukeneyo emithathu, ukuze ukwazi ukukhetha ukuba yeyiphi ehamba ngokukuko ngemibala yebhayisikile yakho.
Bona ngakumbi malunga - Iibhayisikile ezi-8 ezigqwesileyo zeentaba ezingaphantsi kwe- $ 500
5. IFiziksi Antares yiR3
Yenzelwe abakhweli abaguquguqukayo ngandlel 'ithile, esi sihlalo sinomxube ogqibeleleyo phakathi kokuguquguquka kunye nokuqina. Ngelixa ingenakho ukunceda kakhulu, ikunika inkxaso eyoneleyo. Ngaphandle kokulingana kwayo ngokubanzi, le Fizik Saddle yeyona nto iguquguqukayo ejikeleze imiphetho kanye apho ibetha khona emathangeni akho angaphakathi. Oku kubalulekile kuba ibonelela ngemilenze yakho uluhlu olupheleleyo lwesindululo sokusebenza kokugqibela.
Umzila kaloliwe weprimiyamu udibanisa ingxubevange yesinyithi, uyilo oluthile lwe-tubular, kunye nokugqitywa okuqinisiweyo. Le yokugqibela kwandisa ukuxhathisa ukudinwa isihlalo phantsi kwazo naziphi na iimeko. Ngenxa yokuba ukuhanjiswa kobunzima kuhlala kunjalo, kuya kuba nethuba elincinci lokufumana isali kwindawo ethile, edla ngokwenzeka kwezinye.
Igobolondo yenziwe ngeglasi edityanisiweyo eyomeleleyo kunye nenayiloni edibeneyo. Eli nqaku lenza ukuba esi sihlalo somelele kakhulu kwaye sibonelele ngokufanelekileyo. Isigqubuthelo esingaphandle siqukethe irabha yeMicrotel, kunye nayo ineklip yomdibaniso eyahlukileyo eyenza ukuba kube lula ukuyinyusa.
6. Ubungakanani bePrologo Dimension Tirox Road
Iitattoo zesikhumbuzo sokuloba kutamkhulu
Kulabo banengxaki yokubandezeleka kwindawo ebuthathaka, esi sihlalo sinasoIjelo elenzelwe ukuphelisa uxinzelelo kunye nokubhabha ngelixa liphucula ukuhamba kwegazi ngaxeshanye. Ukuba ukhetha ukuthuthuzelwa kukukhwela umgama omde naphakathi, esi sihlalo sePrologo sinokuba lolona khetho lubalaseleyo kuwe.
Uyilo lwayo lwesihlalo se-ergonomic luyancedwa ligwebu ngokuxinana okungafaniyo kwabagibeli abanobhetyebhetye obuncinci kumqolo wabo osezantsi. Ngapha koko, ibuyekeza ukungabikho kokujikeleza kwe-pelvic nayo.
Imizila ye-Tirox engasindiyo yenziwe nge-alloy yentsimbi, ibenza ukuba banganyamezeli nakuphi na ukubambeka kunye noxinzelelo olunxibelelene nokukhwela kumhlaba ongalinganiyo. Ikwaxhathisa uxinzelelo kwaye inokumelana noxinzelelo olomeleleyo ixesha elide. Oku kuqinisekiswe nguPrologo, njengoko banikezela iwaranti yezinto okanye iziphene zokwakha ukuya kuthi ga kwiinyanga ezingama-24 ukusuka kumhla wokuthengwa kwemveliso.
7. I-Ergon ST Gel Isali
Ukuba uhlala ufuna ukubanjwa okungaphezulu kwaye mhlawumbi kuye kufuneke ukuba usebenzise iisali ezithile ngaphambili, esi sihlalo sinokuba yeyona ndlela ineendleko ezifanelekileyo kwezo. Ngokudityaniswa kokufakwa kwejeli pad, esi sihlalo se-Ergon ST Gel sinika isihlalo esihle nokuba uyayidinga xa ukhenketha okanye uhamba umgama kwindawo embi.
Uyilo lwe-ergonomic lunceda ukusasaza uxinzelelo kumathambo akho ngokulinganayo, ukongeza ukongeza kwiimvakalelo zokuphucula intuthuzelo. Esi sihlalo sikwaxhotyiswe ngejelo loncedo, elili-size esifanelekileyo ukunceda ukuthintela ukungathandeki kwizicwili ezithambileyo ezibuthathaka.
Iipads zejeli ezingaphakathi zikunceda uzive ukhululekile nokuba unxibe iibhulukhwe ezimfutshane zebhayisekile okanye akunjalo. Kwangelo xesha, izinto zokugubungela isihlalo esidibeneyo kunye neqokobhe ziyenza yomelele ngokwaneleyo. Ngaphandle koku, isihlalo asisokuze sibangele ukothuka, nokuba ungahamba kangakanani okanye ubile. Ukongeza, i-railing yenziwe ngentsimbi eqinisiweyo, isenza esi sihlalo se-Ergon ukuba somelele ngakumbi.
8. IBontrager Commuter Comp Bike Saddle
Nokuba abakhweli abasebenzisa iibhayisekile kuphela ukuhamba mihla le bayayifuna intuthuzelo enokubonelelwa sisali efanelekileyo yebhayisekile. Nokuba ungahamba kancinci kangakanani kwibhayisikile yakho, esi sikhwama sebhayisikile seBontrager Commuter Comp sinokukunika inkxaso oyifunayo. Ungayichazanga indlela ukunqongophala kwemiqolo okusenza ngayo esi sihlalo ukuba sixhathise imozulu kwaye ke oko kuzomelele ngakumbi.
Uyilo lokusika olubanzi lubonelela ngokhuseleko olwaneleyo kwithishu yakho ethambileyo. Musa ukuvumela ukucekiseka kwayo kukukhohlise. Ngaphandle kokuziva uthambile, isihlalo singqina ukuba asihlali nje sicocekile kodwa somelele ngokunjalo.
Yakhelwe ngogwebu lomoya kunye negobolondo yokuxinana enika intuthuzelo ehlala ixesha elide nokuba kufuneka ukhwele ixesha elingakanani. Imizila yentsimbi eyomeleleyo eyongezelelweyo kunye nenxalenye ephezulu ivumela ukujikeleza okuthe tye kwentloko kunye nendawo ekuvumela ukuba uhambe ngokukhawuleza nangaphezulu xa kufuneka njalo.
Bona ngakumbi malunga - Iibhayisikile ezi-8 eziBalaseleyo zeHybrid ngo-2021
IMIBUZO YEBHAYIBHILE Yesihlalo
Yintoni isihlalo sebhayisikile?
Isali yebhayisekile yindawo ohleli kuyo xa ukhwele ibhayisekile. Kwangokunjalo naxa uhleli esitulweni, xa ukwindawo yokukhwela, amathambo kwelona nqanaba lisezantsi elilenzeni axhasa ubunzima bomzimba. Kulapho isali ilingana khona kwaye inceda ukukhulula amathambo kunye nezicubu ezithambileyo zoxinzelelo.
Isali iqhotyoshelwe kwindawo yesihlalo embindini wolwakhiwo lwebhayisekile yakho. Ukuphakama kwayo kuhlala kunokuhlengahlengiswa ngokuyi telescoping ngaphakathi nangaphandle kwetyhubhu yesihlalo edibanisa nebhayisekile. Ineqokobhe ebonelela ngemilo kwaye uninzi lwenkxaso, kwaye yenziwe ngesiqwengana seplastikhi, senayiloni, okanye sentsimbi yekhabhoni. Le nkxaso yangaphakathi igutyungelwe okanye i-gel padding ilandelwa sisiciko sangaphandle esine-spandex, i-vinyl, isikhumba esenziwe ngumntu, okanye isikhumba.
Zithini izibonelelo zesali yebhayisekile?
Izihlalo zebhayisekile zidlala indima ebalulekileyo ekwenzeni uzive ukhululekile xa ukhwele. Ukuba abonwabanga, banokwenza ukuba uyeke ukukhwela ibhayisekile ngokupheleleyo, ngakumbi ukuba usaqala. Isali efanelekileyo kufanelekile ukuba ilungele uhlobo lokukhwela kunye noomatshini bakho.
Iisadles ezinokutshixwa okungaphezulu kwenzelwe ukuba ukonwabele ukukhwela ibhayisikile okwexeshana kunye nokuhamba ngenqanawa. Kwelinye icala, iinqwelwana zokwenza umsebenzi zinephedi encinci yokwenza amandla amakhulu okuhambisa kunye noxinzelelo oluncinci ezindleleni, entabeni nakwiibhayisikile zokutyelela.
Isali efanelekileyo kufanelekile ukuba ilungele uhlobo lokukhwela kunye noomatshini bakho. Iisadles ezinokutshixwa okungaphezulu kwenzelwe ukuba ukonwabele ukukhwela ibhayisikile okwexeshana kunye nokuhamba ngenqanawa. Kwelinye icala, iinqwelwana zokwenza umsebenzi zinephedi encinci yokwenza amandla amakhulu okuhambisa kunye noxinzelelo oluncinci kwiibhayisikile zendlela, entabeni, nakwiibhayisikile zokutyelela.
tattoo emva kwengalo
Uhlawule malini ngesali yebhayisekile?
Kuxhomekeka kwinto ofuna ukuyifumana kwisali. Ngentuthuzelo encinci, unokufumana ezinye ezingaphantsi kwe- $ 50. Ukuba ufuna isali enzima kunye nokutshixa ngakumbi ukusabalalisa amandla ngokulinganayo, oko kuhlala kubiza kufutshane ne- $ 100.
Ukuba uyasokola ukufumana ulungelelwaniso olulungileyo, unokufuna ukukhetha iidali ezikhethekileyo ezisukela naphi na phakathi kwe- $ 160 ukuya kwi- $ 500. Imali ekufuneka uyihlawule ekugqibeleni ixhomekeke kwintuthuzelo oyifunayo kunye nezinye izinto ezinje ngokuba uza kukhwela ixesha elingakanani.
Ingcambu yemali yazo zonke iitatoo ezimbi
Iimpawu eziphezulu zezihlangu zamadoda
zangaphandle iiwindow zinquma izimvo
iimpahla zokunxiba kwiklabhu
Izimvo zekhitshi, imifanekiso